Die Nkedo, Aluminium Aja Nkedo, nkenke CNC machining - Innovaw
Ningbo INNOVAW n'ibu CO., LTD bụ ọkachamara emeputa mgbatị na machined akụkụ nke na ọtụtụ-eji maka Automotive, Medical, earthmover, mmanụ ala, na ọkụ eletrik na ọkụ Mmeputa. Ịrara na ogologo oge azụmahịa na ndị mba ọzọ ahịa si North America na n'ebe ọdịda anyanwụ Europe, anyị na-kpọmkwem maara ihe bụ ihe na ndị ahịa chọrọ mgbe ha na-enye nghọta na ihe nkọwapụta. Na anyị engineering nwere ike na-atụ aro ndị kasị mma usoro na technology na-eme ka mpaghara ma ọ bụ ọ bụla imewe na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọtụtụ n'ime anyị na ngwaahịa na-exported ka Canada, USA, na n'ebe ọdịda anyanwụ Europe Germany, France, Italy, Norway, Finland, Switzerland, wdg ma merie aha ọma n'etiti ahịa anyị.
Ningbo INNOVAW anwụ mgbatị bụ ụwa ndú na nkenke anwụ mgbatị nke zinc, aluminum na magnesium alloys. View ikpe ọmụmụ si dị iche iche ọrụ na echiche maka akụrụngwa mma site anwụ nkedo.
anyị TS16949 na ISO14001 gbaara.
professinal emeputa nke na-anwụ mgbatị tooling, elu nsogbu anwụ mgbatị, aluminum ndọda mgbatị, ala nsogbu anwụ mgbatị, nkenke CNC machining fọrọ nke nta ka afọ 20.